Home / समाचार / मोबाइलको लक बिर्सियो ? चिन्ता नगर्नुस् यसरी सकिन्छ आफै खोल्न
मोबाइलको लक बिर्सियो ? चिन्ता नगर्नुस् यसरी सकिन्छ आफै खोल्न 0
५. यी सबै ४ नम्बरको प्रक्रियामा आधारित हुनेछ। जसले केही समय लिन सक्छ। यसपछि भने तपाईँको स्विचअफ गरिएको स्मार्टफोनलाई रि-स्टार्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँको हातमा अनलक भइसकेको स्मार्टफोन हुनेछ।
करिश्मा मानन्धर र छोरी रिसाउन एकदम माहिर, छोरीको जन्मदिनमा यस्तो रमाईलो गर्दै गरे खुलासा - हेर्नुहोस भिडियो